Home Ulo oru Europe Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa
LB na-enye Full Story of a football football best known by the nickname; 'Alvarito'. Ụmụ Alvaro Morata Ụmụaka Akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Na-amalite.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ndụ nwata
Foto Alvaro Morata Foto
A mụrụ Alvaro Morata Álvaro Borja Morata Martín na Madrid, Spain na October 23, 1992 site na nna ya, Alfonso Morata na nne Susana Morata.
Ọ bụ nwa a kara aka, onye a mụrụ ikpeazụ na ọ bụ nanị nwa nke ndị mụrụ ya toro na ala nke ịhụnanya nke nlekọta. Ọbụna mgbe ọ na-awagharị dị ka nwatakịrị, ọ mụtara otú e si achụ football dịka ihe egwuregwu. Nke a bụ mgbe ọhụhụ ya dị n'ihu.
Alvaro Morata na-etolite mara onye ọ bụla mara, talent na ọdịmma ya. Ọbụna mgbe ọ dị mkpụmkpụ, obi ụtọ dị n'ime ya bụ ihe gbasara football. Ọ ghọrọ ntọala maka ndụ ya niile dịka anyị na-ahụ taa.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Nwa nke Madrid
Ịbụ onye a na-amụ na Spanish Capital na-abata ọtụtụ uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere nkà na football site na nwa. Nke a bụ ihe gbasara Morata na-eto eto, nke onye ọhụụ dịka onye na-ekwe nkwa na-eto eto karịrị nnọọ nkezi.
Ịhụnanya na-adịgide adịgide maka egwuregwu ahụ mgbe ọ dị afọ 3 bụ ụzọ maka ụzọ zuru oke maka egwuregwu ahụ. Nkwado site na ndị nne na nna na ndị hụrụ n'anya bụ isi ihe na-eme ka ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịgba ọsọ.
Alvaro Morata toro nso na Vicente Calderón Stadium (Atletico Madrid Stadium) na Santiago Benabau (Real Madrid Stadium). Ọ bụ onye na-egwu ma klọb.
N'oge na-adịghị anya, klọb abụọ ahụ malitere ịkpọ nna ya ka ọ bịanye aka na mbinye aka nwa ya mgbe ọ matara na ọ bụ kpakpando.
Dika Morata si etinye ya, Papa m gwara m na ha na-akpọ ya. A nwara ka o kwe ka m sonyere Atletico n'ihi na ọ dị nso n'ụlọ. Ọ na-eche na ịjụ ịchọta ohere Real Madrid ga-akwa ụta. Ọ bụ n'ihi nke a ka m sonyeere mahadum football dịka nwatakịrị nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla.
Ọ malitere njem njem ya na ụlọ akwụkwọ eziokwu Real Madrid nke dị na 3. N'ọtụtụ oge, a họpụtara ya dịka mascot maka ụfọdụ egwuregwu Real Madrid. O kwesiri ka ya na ndi n'ekwado ukwu dika ndi di ka Raúl González Blanco, Iván Zamorano, Roberto Carlos, na dike bu Fernando Morientes.
O doro anya na, ebe ọ bụ ndị kasị mma egwuregwu n'ụwa gbara ya gburugburu, ọ ga-eme ka ụfọdụ n'ime ụzọ ha gbanye ya n'ihi ọchịchọ ya na-agwụ agwụ na nrọ ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Real Madrid. Ị mụtara otú ị ga-esi gụọ na ide ihe, ma ị chọghị ịkwalite ogo ya. Dị ka ya si kwuo,
"M na-ahapụ akwụkwọ m n'ụlọ n'oge niile n'ihi na echefu m, mana m na-echeta mgbe niile ka mụ na Santiago Benabau gaa bọl ma ọhụụ ma ọ bụ ụgbọ oloko dị ka nwatakịrị. Ahụrụ m football n'anya kemgbe m nwere ike ije. Echeghị m banyere ihe ọ bụla ọzọ, ana m eche mgbe niile ka m nwee ike ịgba bọl. Anọ m na-etolite n'oge na-adịghị anya na-ekiri egwuregwu, ọ bụrụgodị na ọ bụ Njikọ Njikọ Njikọ nke gafere oge oge, ọ dịghị onye nwere ike ịme m ka m dinara ụra ".
Ọ nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ọ bụ afọ 13 tupu ya anwale Atletico uwe elu naanị afọ abụọ. Nke a na-esote ịkwaga Real Madrid C.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ndụ Ezinụlọ
Nna: Alfonso Morata bụ nwoke na-egwuri egwu nke ukwuu na ndụ nwa ọ mụrụ naanị ya bụ Alvaro.
N'ịbụ onye raara onwe ya nye ndụ ya niile ka ọ bụrụ ahịa ụlọ ahịa, Alfonso nwetara ihe ọ chọrọ iji bụrụ onye nlekọta kachasị mma maka nwa ya nwoke. Otu n'ime ihe kachasị mma ọ ga - eme dị ka onye njikwa bụ ịzụkọrịta Real Madrid maka nlọghachi nke nwa ya mgbe ọ nụsịrị na Juventus.
Dị ka ọ na-ekwu mgbe niile "Oge kachasị m oge kachasị mma bụ mgbe aha nwa m nwoke na-aga na ahịa mbufe. M na-ahụ Football ka ọ bụ ahịa ahịa. na 48 awa, ihe ọ bụla nwere ike ime otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ "
Ndụ Alvaro Morata dị mma karịa ekele maka nchebe ha, nkwado, nurturing, na mmekọrịta nna-nwa na-ekpo ọkụ.
Nne: Nne Alvaro Morata, Susana Morata abụrụ otuto maka nlekọta nne na-egosi nwa ya na ụzọ ọrụ ya.
Nwa nwanyi nke nwanyi nke Madrid na-abia mgbe o na abia n'oge oge ezumike. Ọ bụ nnukwu onye ofufe Real Madrid. Ọtụtụ mgbe, ọ na-ewute na nwa ya kwesịrị nọrọ na-egwu bọl na obodo ya. Ọ dịghị akwado nwa ya nwoke ịhapụ Real Madrid na ụlọ ọzọ. Susana hụrụ Real Madrid n'anya, ọ chọghịkwa ịnụrụ aha nwa ya na mbufe ozi.
Ọ nabatara ọbụna mgbe ọ gwara ya na ịnakwere inyefe bụ akụkụ buru ibu na usoro mmezi ya dịka mmadụ na onye ọkpụkpọ. Ọ na-achọ mgbe ọ bụla nwa ya ga-anọ n'ime ya na isi obodo Spanish, Madrid.
Nwanna nwanyị: Marta Abril bụ Alvaro Morata nke naanị otu okenye. Ha abụrụ ezigbo ndị enyi site n'oge ha bụ nwata.
Marta ghọtara ihe ịbụ ezigbo nwanne na otu esi elekọta obere nwanne pụtara. Dị ka ya si kwuo, "O were m ndidi, ndidi na njikere ịchọta oge iji jikọọ nwanne m nwoke site na nwata"
Mmekọrịta ha dị mkpa ruo ụbọchị. Ha abụọ gosipụtara ịhụnanya maka ibe ha ọbụna n'ahụhụ na mkpa. Marta bu uzo mara nma nke bi na Madrid. Ụbọchị ndị a, ọ na-egosi nkwado ya maka nwanne ya nwoke site na ịga n'ámá egwuregwu n'oge oge ya na n'oge ndị ọzọ site Twitter na instagram.
Mgbe ịbụ a Real Madrid kpakpando Alvaro Morata enweta ego na ubi, Nwanne ya nwanyị na-edepụta ihe maka ihe kpatara ya. O meela ka ọ bụrụ nwa okorobịa mara mma nke talent talent ya na-adọta ọtụtụ puku ndị Madrid.
Ihe mara mma mara mma, Abril Marta, ahapụghị nkume ọ bụla a na-agbanweghị na ya ma ọ bụrụ na ọ dị mma. Ọmarịcha ịma mma ya, ntutu isi ya na ntukwasi obi na-ekepụta ihe na-akpali akpali na ịntanetị.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ndụ mmekọrịta
Mmekọrịta Alvaro Morata na Venice amụrụ ihe nlereanya na onye mmepụta ejiji bụ Alice Cambello malitere ma gaa ọha n'oge 2016 mgbe ọ nọ na Juventus.
Nne nna Alice choro Morata di ka enyi nwoke bu ihe ngbagha dika nna ya duru ya aka na nti ka ya na ndi n'ejighi aga.
Alice lụrụ ọgụ iji hụ na mmekọrịta ya na-arụ ọrụ. Dị ka ya si kwuo, "Aga m echebe onwe m mgbe niile. Ndụ m dị na Alvaro Morata "
AKWỤKWỌ NDỊ NA-AGBANYE NDỊ NA-AGBANYE: Na 10th December 2016, Alvaro Morata amagburu nwa agbọghọ nwanyị ya bụ Alice Campello site na ịkwado ya na ogbo n'oge ngosi anwansi na isi obodo Spanish. Ọ bụ na ihe ngosi a na-akpọ El Mago Pop. A ngosi nke eji nlezianya dezie ya atụmatụ.
A gwara di na nwunye ka ha bụrụ akụkụ nke ihe omume anwansi ma bụrụ ndị a na-ebugo n'elu ụlọ. Onye ozo di egwu gbanwere Alice, ya mere o chere ihu na Morata tupu o kwuo "Nke a ga-abụ ihe kachasị mma ị hụworo ná ndụ gị". O leghaara anya n'uzo ozo wee hu enyi ya nwoke Morata na ikpere ya. Ọ gwara ya na otu ikpere, na-ege ntị na-aga ọhịa.
Morata mesịrị nye foto nke mgbanaka n'aka ya na Instagram na ihe ntinye: "Ọ sịrị ee! Anyị na-alụ di! Ahụrụ m gị n'anya @alicecampello. "
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Egwuregwu na Football
N'oge ụfọdụ n'oge ọ bụ nwata, ndị nne na Morata na-amanye nwa ha ka ha bụrụ ndị ọzọ na-eme ka ọ lekwasị anya na ọkwa ya. Dị ka ha si kwuo, inweta ọzụzụ bụ ihe dị mkpa ma chọọ ịbụ ndị na-agba ọsọ na-aga nke ọma, ọ ka nwere ike ime ka mmadụ nwee obi ụtọ na ndụ, ego, nha anya, ịdabere n'onwe ya. Ndị mụrụ ya chọrọ ka ọ mụọ Ọgwụ na Ịwa Ahụ dị ka ihe dị mma karịa football.
Dị ka Alvaro Morata si kwuo,
"Real Madrid kpọrọ mama m ka ọ mara ihe mere m ji na-anọghị na ọzụzụ. Ọ bụ oge m na-anaghị eme nke ọma n'ụlọ akwụkwọ, ha agaghị ekwe ka m gaa ọzụzụ ruo mgbe akararịrị m ka mma. "
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ịhụnanya maka Tennis
Ịhụnanya ya maka Tenis na-eto eto mgbe a napụrụ ya ịgba egwu ruo mgbe akara ule ya dịkwuo mma. Nke a bụ oge siri ike maka Morata kpọrọ asị na-amụ. Obi abụọ adịghị ya, kama ịnọgidesi ike n'oge ihe isi ike ma ọ bụ ihe mgbu, ọ chọtara ihe ọzọ na football. Dị ka Alvaro na-etinye ya,
"Ọ bụ mmalite nke oge ebe m kwụsịrị ịkụ bọl, enwekwaghị m ịhụnanya maka ya. Amalitere m iche echiche banyere ịhọrọ tennis, n'ihi na m na-ejikwa egwu ahụ, echekwara m na m ka mma. Enweghị m isi maka ya n'agbanyeghị na enweghi m ndidi ".
Ọ dabara nke ọma, akara ya nwere ike ịbawanye mma mgbe ọ kwụsịrị ịga ọmụmụ ihe. Taa, a na-ewere Alvaro Morata dịka otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ kachasị mma nke nwere ike igwu egwu egwuregwu ogologo. Ọ na-egwuri egwu na ndị òtù ọlụlụ ya na-achọ mmasị na egwuregwu ahụ. N'agbanyeghị otú oge chọrọ football bụ, Morata ka na-emepụta oge iji kpọọ nnukwu kpakpando tọọlụ na ezi enyi Rafael Nadal maka ụfọdụ omume tenis.
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka football bụ nọmba ya otu egwuregwu egwuregwu, Alvaro Morata gaara etinye aka na tennis ogologo.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ememme SunGlass
Alvaro Morata emeela ihe a na-akpọ "Ememme Egwuregwu Ọhụụ na Egwuregwu Football". Ọ bụ ya "Nagide ya" ememe. Onye Spen na-eme ihe ọ kachasị mma 'na-emeso ya' mgbe ọ gbasịrị mgbaru ọsọ 83rd na njedebe megide Inter Milan. Ọ bụ ezie na otu onye na-akwado abụghị ihe kacha mma.
Ee, onye ọ bụla nwere obi ụtọ ma e wezụga otu nwoke. Onye nwe ugogbe anya maka anwụ. Anya ugogbe anya n'eziokwu sitere n'aka onye na-akwado ya na ìgwè mmadụ, onye na-akwado Inter bụ ndị otu ndị agha nabatara ihe mgbaru ọsọ sitere na Spaniard. ANYỊ enweghị obi ụtọ na Morata.
Dị ka onye ahụ na-adịghị mma, Simone .. "N'ihi na nnukwu Inter fan dị ka m, ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ ịhụ onye Juve ọkpụkpọ na-etinye na m iko," Ọ gbakwụnyere,
"Ọ bụ ezie na iwe were m nke ukwuu na ndị otu m kwadoro ihe mgbaru ọsọ ahụ. Morata ndị meriri wee bịa ememme n'okpuru Curva ebe m nọ. Enwere m ugogbe uzo m n'aka, ọ gbapụrụ n'aka m ka m na-ama jijiji na ọnọdụ ahụ. Mgbe m hụrụ ka Bonucci na-akpọrọ ha ma nyefee ha n'aka onye òtù ọlụlụ ya, agbalịrị m ịkpọku ya, mana ọ nụghị m. Ihe ọzọ m hụrụ bụ Morata yi ha. Mgbe ememe ya gasịrị, ọ tụbara ha n'akụkụ nke pitch na onye maara ebe ha kwụsịrị. Ahụghị m ha ọzọ. N'ụzọ dị mma, naanị m akwụ ụgwọ 2 maka ha n'ahịa ahịa. Ọ bụ ihe mberede ma ejighị m ịmafu ha. "
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ụda Ebube Ya na Njikọ
Mbụ mbụ nke Morata na Real Madrid bụ n'ihi otu nwoke. Onye ukwu ya, ọ bụghị aha ọzọ mana Fernando Morientes.
Ịhụnanya ya na-adịgide adịgide maka Fernando Morientes mere ka a gbanwee nhọrọ maka ịchọta ọnọdụ ya (Central Forward) dịka ụmụ amaala. Morata dị iche iche n'etiti ụmụaka niile na-arụ ọrụ ahụ. Ekele maka ịmegharị bọl ya na imecha ikike ya.
NKỌ NKE: E zigara AS Monaco mbinye ego na 2003 / 2004, ebe o gosipụtara isi na ụkwụ abụọ nke UCL nke ikpeazụ n'ikpeazụ iji merie Real Madrid ma mesịa mee Monaco n'ikpeazụ. Morata enwetala ụdị akụkọ ihe mere eme.
Otú ọ dị, e nwere nnukwu ihe dị iche. N'ịkọ ihe mgbaru ọsọ ya megide Real Madrid na Monaco, Morientes mere ememe nke ọma n'ihu oche nke onye ọbịa ahụ. Morata jụrụ ime ememe ọ bụla.
Dika Morata si kwuo, "Ọ dịghị esiri m ike ịghara ịgba egwú na Turin ma ọ bụ na Bernabeu. Emeghị m ememme, agaghịkwa m eme ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ọtụtụ puku ugboro. "
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ndụ na Juventus
Nke a bụ ihe o kwuru;
"Real Madrid jupụtara na ndị kasị mma egwuregwu na ụwa na ọ bụ siri ike, ya mere m wee pụọ, iji nwee ike ịloghachi otu ụbọchị. Enwetara m mmerụ dịka m rutere na Juventus ma anaghị m eme oge gara aga. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, esiri m ike. Amalitere m ile ihe nkiri na ịgụ na Ịtali, agbalịrị m ime mgbanwe. Na njedebe, anyị meriri oriri na iko ahụ, ọ gaghị agarịrị mma. Ndị Fans hụrụ m n'anya nke ukwuu. Ihe na-eme ka anyị gbagide Madrid na Njikọ Njikọ na enwere m ahụhụ n'ezie. Enwere m ihe mgbaru ọsọ, ma agara m akwụ ụgwọ dị mma maka ya ka ọ bụrụ onye ọ bụla ọzọ. Enwere m ụgwọ maka Madrid na Bernabéu ".
Alvaro Morata, bụ onye Juventus, gosiri na ya enweela ike ịmalite ilekọta onwe ya ebe ọ bụ na ọ bịarutere Old Lady n'oge okpomọkụ ma kweta na mgbanwe na gburugburu ebe obibi enyerela ya aka ito eto.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Nlaghachi na Madrid
"Ọ bụrụ na Real Madrid azụghị m, okpomọkụ ahụ bụ oge ikpeazụ m ga-abịa ma kpọọ ebe a. Anọ m na Euro 2016 ma onye nnọchiteanya m na-akpọ m na m na-alaghachi. Ha nyere m nkwekọrịta ọhụrụ ma nwee ike ịgwa m na ọ gaghị ere m, na ha nwere okwukwe na m. Ọ bụ otu ụbọchị m na-echere ruo ogologo oge. Agara m inweta ahụmahụ. Enweghi m ike itinye obi m n'ụbọchị m na-ekwu ".
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Olee otú ịhapụ Madrid mere ka obi sie ya ike
"Mgbe mmadụ na-apụ n'ụlọ ya, site na obodo ya na ndị enyi ya nile, ọ nwere ike na-eto eto na nkà na uche," " kwuru, sị mba Spain, Alvaro Morata.
"Ọ bụ ụzọ nke na - eme ka ike gị dị ka onye. Oge ụfọdụ gara aga, mgbe m nọ na Madrid, ọ bụrụ na ihe mere na-ezighi ezi n'ubi, echere m nke ọma. "Otú ọ dị, na Turin m nwere nanị nne na nna m, enyi nwanyị m na ndị enyi ole na ole, ya mere, mgbe m na-emeghị nke ọma, ọ bụghị ọtụtụ ndị na-enyere m aka, aghaghị m idozi ihe n'onwe m.
"Ị nwere ike ịhụ otú m nọ n'ọhịa. Ugbu a, ọ bụrụ na m eme ihe ọjọọ, anaghị m agbada isi, ana m atụ anya ohere ọzọ. "
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ikwanye Uwe Ya Maka Onye Ọrịa
Na March 2014, Alvaro kpochapụrụ isi ya ka ọ dịrị n'otu maka ụmụaka na-arịa ọrịa, na-ekwu na "Ụmụaka nwere ọrịa cancer chọrọ ịkpụ ntutu m, ma ha enweghị ike, n'ihi ya, m nyere onwe m onwe ha."
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Q na A na Football.
Ajụjụ: Ebee ka ọ na-adị gị mfe. 9, 7 ma ọ bụ 11?
Azịza Alvaro Morata: "Ruo afọ ole na ole, ndị nkụzi etinyewo m na nku ma ọ bụ na mpụga igbe ahụ na ndụ m niile, abụwo m onye na-egbu ihe. Enwere m ike imeghari ma gbalịa ime nke ọma n'ọkwá ndị ọzọ, ma ebe m nwere ike inye ọrụ kachasị mma na ebe m na-egwu nke ọma bụ 9. "
Ajụjụ: Ị na-enwe obi iru ala?
Azịza Alvaro Morata: "Mba, ọ dịghị ma ọlị. Ọ dị oké oke ọnụ (ọ bara uru) iji rụọ ọrụ na Madrid, m ga-egwu ebe ọ bụla m nwere ike. Ọ bụrụ na ị na-enye m gloves m ga-abụ onye na-eche nche, ma nke ọma, dị ka 9 m nwere ike ime ka mma. Enwere m obi ike karịa n'ihu nku. "
Q: Kedu ka ị ga - esi nweta ihe kachasị?
Azịza Alvaro Morata: Laa azụ n'ụbọchị, ọ bụ Fernando Morientes. Ntakịrị ihe niile, ma onye ahụ metụrụ m n'ahụ ụbọchị ndị a bụ Gonzalo Higuaín.
Ụmụaka Alvaro Morata Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa -Ndụ LifeBogger